Ny rainy sy ny raibeny ihany no nahavanon-doza…: saika hamidy 100 000 Ar ilay zazamenavava | NewsMada
Ny rainy sy ny raibeny ihany no nahavanon-doza…: saika hamidy 100 000 Ar ilay zazamenavava
Par Taratra sur 09/01/2021
Misy efa tena mahasahisahy… Tranga iray tsy fahita firy ity niseho tany Analamalotra Toamasina ity satria ny rainy niteraka sy ny raibeny ihany no nikasa hivarotra ilay zazamenavava. Tsy vitan’izay fa niharan’ny daroka koa ny reniny ary voakasika ilay zaza. Am-pelatanan’ny polisy ny raharaha.
Mampahonena! 6 km miala an’i Toama­sina ny toerana misy ireto olona nikasa hivaro-janaka ireto. Ny dadabeny sy ny rainy niteraka azy ihany no nikasa hivarotra ny zanany vao menavava (lahikely), vao roa volana monja. Tsy vitan’
izany fa efa niharan’ny daroka nataon-drainy niaraka amin-dreniny koa ity zazakely menavava ity. Raha ny an­gom-baovao voaray avy amin’ny polisy ao Toamasina, ny alahady alina 3 janoary 2021 teo, efa niketrika ny fomba rehetra hamarotana ity zazamenavava ity ireto mpianaka ireto ary tapaka nandritra ny fifampidinihan’izy mianaka fa 1 hetsy Ar (100 000Ar) ny hamarotana ilay zaza. Ny olona eo amin’ny manodidina no nilaza tamin-dramatoa renin’ilay zaza fa mandosira ianao fa hamidin’ny vadinao sy ny rafozanao ny zanakao, araka ny filazan’ireo olona mahafantatra ny teti-dratsin’ireto mpianaka ireto. Tsy niandry ela tokoa ilay renim-pianakaviana fa lasa nandositra tany an-tokantranon’olona tamin’io alahady alina io. Ny alatsinainy vao maraina kosa izy mianaka no nisy nampandositra tamin’ny alalan’ny polisy nihazo an’i Toamasina. Tao indray izy mianaka no nisy nampiantrano tao Ana­lankinina Hopitalibe Toama­sina izay fianakavian’ilay renim-pianakaviana nampandositra azy voalohany ihany.
Hampodiana any Maroantsetra izy mianaka…
Ny talata teo, noraisin’ny polisy misahana ny vehivavy sy ny zaza tsy ampy taona izy mianaka ireto. Nandritra ny fanadihadiana sy ny fitsirihana nataon’ny polisy ny nahitana ratra teo amin’ny lohan’ilay zaza sy ny reniny. Nalefa any amin’ny centre Vonjy izy hijerena sy hanaraha-maso ny fahasalaman’izy mianaka. «Tsy manana fianakaviana eto Toamasina izahay mia­naka», hoy ny fitantaran’i Annissa, 20 taona, renin’ilay zaza. Nandritra ny fanadihadiana hatrany ny nahalalana fa nandritra ny fotoam-piasan’ilay raim-pianakaviana tany Maroantsetra no nifankahitan’izy roa ary nifankatia ka niteraka ity zazakely ity izy roa. Rehefa hody any Toa­masina anefa ilay raim-pianakaviana, nanaraka azy koa izy mianaka kanjo izao tratran’ny herisetra vatana nandritra ny fotoana niarahan’izy ireo nipetraka tao Analamalotra. Fantatra kosa anefa ankehitriny fa horaisin’ny dokotera Ndahimananjara Johanita ny fampodiana azy mianaka any Maroantsetra.